Degmada Awbare iyo Munaasabada Xuska 18 Jirsatay Ee XDSHSI. - Cakaara News
Degmada Awbare iyo Munaasabada Xuska 18 Jirsatay Ee XDSHSI.
Awbre(Cakaaranews) Isniin, 7da march, 2016, Waxa maanta guud ahaanba si meeqaam sare ah looga xusay deegaanka sanad guurada xuska 18aad ee XDSHSI, waxaana ka mid ahaa meelaha sida wayn looga xusay maanta magaalada awbare ee degmada awbare.
Munaasabadan lagu maamuusayay xuskan oo ka dhacday barxada wayn ee xarunta maamulka degmada ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta maamulka degmada, odayaasha degmada, haweenka, dhalinyarada, ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada awbare iyo kooxaha hidaha iyo dhaqanka.
Waxaana ugu horayntii la hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada awbare mudane Maxamed Cabdi Faarax oo sharax dheer ka bixiyay taariikhdii iyo soonyaalkii iyo isbedaladii siyaasadeed dhaqaale ee uu soo maray xisbigu isaga oo ka warbixiyay gudoomiyuhu guulaha waawayn ee uu soo hooyay shacabka deegaanka kaasi oo tilmaamay ahmiyada ay leedahay xusitaanka munaasabadandhani.
Dhankiisa waxa isaguna ka hadlay munaasabadaasi madaxa arimaha XDSHSI ee degmada awbare mudane Xikam Axmed Khaliif oo ka warbixiyay ahmiyada guulaha horumarineed iyo nabadgalyo ee uu soo hooyay XDSHSI kana warbixiyay jihooyinkiisa siyaasadeed horumarineed ee uu hiigsanayo xisbigu.
Qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka hadashay munaasabadan xuska 18 jirsatay ayaa sheegay in ay siwayn ugu faraxsan yihiin dabaal daga munaasabadan waxayna hooska ka xariiqeen in ay tahay munaasabadani mid ay xusitaankeedu ku wayntahay quluubta shacabka maadaamo oo uu yahay xisbi ka jawaabay dhamaanba baahiyihii shacabka.
Munaasabadan ayaa intii ay socotay kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee xaafadaha magaalada awbare ay ku soo bandhigayeen ciyaaro iyo dhaantooyin ka turjimaya ahmiyada ay munaasabadani leedahay